Iska-horimaad hubaysan oo ka dhacay Baargaal; Puntland oo sheegtay in ay qabatay koox dabley ah oo weerartay wafti wasiiro ah. – Radio Daljir
Iska-horimaad hubaysan oo ka dhacay Baargaal; Puntland oo sheegtay in ay qabatay koox dabley ah oo weerartay wafti wasiiro ah.
Agoosto 18, 2011 12:00 b 0
Baargaal, Aug 18 – Iska-horimaad hubaysan oo inta la og yahay aan gaysan wax khasaare ah ayaa ka dhacay degmada Baargaal ee gobolka Bari.
Wasiirka amniga ee Puntland Col. Khaliif Ciise Mudan oo ka mid ka ah wafti ka socda Puntland ee booqday degmada Baargaal ayaa sheegay in ay weerar ku soo qaadeen koox dabley ah oo uu ku sifeeyey in ay ahaayeen burcad, ayna qabteen intoodii badnayd.
Md. Mudan oo hogaaminaya wafti wasiiro ah ayaa sheegay in ujeedada safarkoodu ay ahayd kormeer ay ku samaynayaan degmooyinka gobolka Bari, ayna ugu kuurgalayaan xaaladaha amniga iyo nolosha guud ee shacabka ku nool degmooyinka gobolka.
Md. Mudan ayaa sheegay in ragga weerarka soo qaaday ay ahaayeen burcad badeed iyo Al-shabaab, ayna qabteen tobaneeyo ka mid ah dableyda weerarka ku soo qaaday.
Waxaa uu intaas ku daray in ay ku sugan yihiin degmada Baargaal, ayna kulamo la yeelan doonaan odayaasha dhaqanka, indheergaradka, iyo qaybaha kale ee bulshada.
Waftiga wasiirada ayaa waxaa ka mid ah wasiirada Arrimaha gudaha, Maaliyada, ku xigeenka Amniga, ku xigeenka Arrimaha gudaha, guddoomiyaha gobolka Bari, iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dawlada Puntland.
Guddiga maamul-baahinta ee Puntland oo sheegay in ay daraasaad ka hirgalin doonaan 5 ka mid ah degmooyinka Puntland.